ဂါ 09 Jul 2019, 11:13 မနက်
နတ်သမီးနာရီ ( 1440 Beauties)
နတ်သမီးနာရီမှာ ရွေးချယ်ခံရရင် ရုံးခန်းမှာဘာလာလုပ်ရမလဲ ?
Japo Myanmar မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
မေမေချစ်တဲ့သားတွေပိုပြီးများလာတဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်ဂျပန်နိုင်ငံ !!! ချစ်သူကောင်လေးက ဒီလိုပုံစံဆိုရင်ရွေးချယ်နိုင်ပါ့မလား?
လူ ၁၃ ယောက်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းသတ်ခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ် နင်ဂျာ Yukichika Kanakubo !!!!
ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်မှာတွေ့ရတဲ့ မီးဖို‌ချောင်သုံးဓါးအမျိုးမျိုး !!!!!
မင်းသမီးချောလေး Mirei Kiritani ကျန်းမာစွာနဲ့ သားဦးလေးကိုမွေးဖွား !!!!!
ရှေ့ကိုပဲဆက်လျှောက်ပါ!! Keep Moving Forward !!!!!
ဂျပန်မင်းသမီးမှ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့ စက်ရုပ် !!!!